चिया थरीथरीका : कुन बढी स्वस्थ्यकर ? – My Life Magazine
Home /चिया थरीथरीका : कुन बढी स्वस्थ्यकर ?
चिया विश्वभरीमै सबैभन्दा बढी पिइने पेय पदार्थ हो । चाहे तपाईंंको दिन तनावपूर्ण रहोस् पनि अथवा थकानले भरिए पनि, चियालेभन्दा बढी आराम अरु कुनै पनि पेय पदार्थले दिन सक्दैन । नेपालका मानिसहरुका लागि त चिया केवल एउटा पेय पदार्थ मात्र होइन, एउटा भावना समेत हो । चियाका बारेमा केही रोचक जानकारी तथा केही भ्रमहरु यस्ता छन् :
ग्रीन टी ब्ल्याक टीभन्दा बढी फाइदाजनक
ग्रीन टी ब्ल्याक टीभन्दा बढी लोकपि्रय छ । यसबाहेक दुबैमा खासै भिन्नता छैन । दुबैमा फाइदाजनक एन्टि-अक्सिडेन्टहरु पाउन सकिन्छ । चियाको पत्ती फर्मेन्टेशन प्रोसेसबाट गुजि्रएपछि हरियो अथवा कालो हुन्छ । एन्टि-अक्सिडेन्ट दुबैमा पाइन्छ ।
चियामा दुध हाल्दा स्वास्थवर्द्धक हुँदैन
यो निकै प्रचलित भ्रम हो । तर, यसमा कुनै सत्यता छैन । चियामा दुध हाल्नाले त्यसका स्वास्थ्यवर्द्धक फाइदाहरु रत्तिभर कम हुँदैनन् । दुधमा क्याल्सियम हुन्छ, जुन तपाईंंको हड्डीका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । जर्नल अफ एगि्रकल्चर एण्ड फूड केमेष्ट्रिमा प्रकाशित एउटा अध्ययनलाई विश्वास गर्ने हो चियामा दुध हालिसकेपछि त्यसमा पाइने क्याटेचिनको संख्या पनि त्यत्ति नै रहिरहन्छ ।
ग्रीन टीले वजन घट्छ
वजन कम गर्न खोज्नेहरुका बीच के कुरा अत्यन्त लोकपि्रय हुन्छ भने ग्रीन टी पिउनाले वजन कम हुन्छ । यो तथ्यले उनीहरुको मन टुक्रिन सक्छ । किनभने यो कुरामा पनि सत्यता छैन । ग्रीन टीमा एउटा त्यस्तो स्टिम्युलेन्ट पाइन्छ । जसले तपाईंंको मेटाबोलिजम बढाउँछ । तर, त्यसको मात्रा निकै कम हुन्छ । यदि तपाईंं ४-५ कप ग्रीन टी पिउने बित्तिकै आफ्नो वजन कम हुनेछ भन्ने सोच्नुहुन्छ भने त्यो गलत हो ।
अदुवा पनि पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरुलाई टाढा राख्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ । अधिकांश व्यक्तिहरु पेट फूल्ने समस्इा अथवा डाइरियाको समस्यामा अदुवाका सप्लिमेन्ट्सहरु प्रयोग गर्छन् । अदुवामा जिन्जरल नामक बायो एक्टिभ कम्पाउण्ड पाउन सकिन्छ, जसले पेट फुल्ने समस्यालाई कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसो त अदुवाको चिया बनाउनका लागि ताजा अदुवाकै प्रयोग गर्नु पर्छ । किनभने त्यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट अत्यधिक हुन्छ । अनलाइन खबरबाट
मोटरसाइकल–स्कुटर यसकारण टिपरको उच्च जोखिममा,…
अर्जेन्टिनी टीममा आमूल परिवर्तनको खाँचो…
आइन्स्टाइनको भ्रमण डायरी : महान…
Top7Reasons for Divorces…